बीपीको नाममा महेन्द्रको कविता - कोसेली - कान्तिपुर समाचार
बीपीको नाममा महेन्द्रको कविता
बीपीलाई महेन्द्रले कविता सुनाए– अब तिमी हामीलाई छाडेर जान्छौ/हामीहरू त यही नदी, कन्दरा र चौतारीमा सुस्ताउँला/र, तिमीलाई सम्झौंला ।
पुस १०, २०७८ अभि सुवेदी
बीपी कोइराला र राजा महेन्द्रबीच साहित्य एउटा सम्बन्धको कडी थियो भन्ने साहित्य समालोचना लेख्नेहरूले चर्चा गरेको कतै पढ्न पाएको छैन । बीपी र महेन्द्रको सम्बन्ध पछिल्लो नेपाली इतिहासको सबैभन्दा चर्चित र परिणामहरू भएको विषय भए पनि साहित्य त्यसमा आउँदैन ।
बीपीका साहित्यिक कृति र उनका संस्मरणबारे अनेकौं लेख लेखिआएको भए पनि अनि महेन्द्र–बीपीबीच एउटा साहित्यिक महत्त्वको सम्बन्धको प्रसंग भेटिन्छ भन्ने कुरालाई साधारण अर्थमा बुझे पनि मैले यसमाथि कहिल्यै लेखेको छैन । यस छोटो लेखमा बीपी कोइरालाका संस्मरण र अरू केही छलफललाई लिएर चर्चा नगरिएको यस पक्षका केही उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपालका शासक, राजनीतिज्ञ र शक्तिमा आसीन मानिसमा साहित्यको, खासगरी कविताको तरलता, त्यसको माध्यमबाट शक्तिमा बाँधिएका मानिसले मानवीय भावनाको आधार राखेर आफूलाई बाहिर ल्याएर प्रस्तुत गर्न चाहने मनोग्रन्थिको उल्लेखसम्म गरिएको छ । बीपीले साहित्य लेख्नु र महेन्द्रले कविता लेख्नुको बीचमा कुनै पनि समानता छैनन् । तर, बीपी र महेन्द्रबीच साहित्य विषय आएको उदाहरणले धेरै कुरा भन्छ भन्ने ठान्छु ।
विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला (१९७१–२०३९) उर्फ बीपी र महेन्द्रवीरविक्रम शाह (१९७७–२०२९) उर्फ मवीवि शाहका संम्बन्धका मूलतः राजनैतिक आयाम छन् । यो अत्यन्त सर्वविदित विषय हो, नेपाली इतिहासको । त्यो आधुनिक नेपालको इतिहासमा सवैभन्दा धेरै चर्चित अनि परिचित विषय पनि हो । संवत् २०१५ मा पहिलो आम निर्वाचनबाट स्थापित संसद्लाई २०१७ पुस १ गते भंग गरेर पहिलोपटक जनताले चुनेका प्रधानमन्त्री बीपी र अरू नेतालाई आठ वर्ष सुन्दरीजल बन्दीगृहमा राखेका राजा महेन्द्र उनले ल्याएको पञ्चायती व्यवस्था र निर्दलीय शासन पद्धतिका इतिहाससँग जोडिएका पात्र हुन् । तर, त्यो इतिहासको कालखण्डमा सबैभन्दा बढी चर्चित व्यक्ति बीपी हुन् । तिनलाई गणेशमान सिंह र अरू नेताहरूसहित जेलमा राखिएको विषयका अनेकौं राजनैतिक, मनोगत र नैतिक आयाम छन् ।
जेल जीवनमा बीपीले एउटा अर्कै शक्तिको अभ्यास गरे । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले त्यो कालमा जेलभित्रै महत्त्वपूर्ण साहित्यिक कृति लेखे, जुन सवै प्रकाशित भए । त्यो एउटा सिर्जनशील साहित्यिक शक्ति थियो, जसको प्रयोग बीपीले सहज र शक्तिशाली ढंगले गरे । उनले डायरी, उपन्यास र कथा लेखे । जेलमा बसेका बेला इटालीका वामपन्थी चिन्तक आन्टोनियो ग्राम्ची (सन् १८९१–१९३७) ले जेल डायरी लेखे, जुन अहिले अनेकौं विचार र सिद्धान्तको स्रोत भएको छ । सबाल्टर्न, हेजिमोनीजस्ता विषयका स्रोत हुन् ती डायरी । बीपी कोइरालाको राजनीतिक प्रतिभा र त्यो कर्मलाई लिएर विचारका आधार बनाउन सक्ने क्षमता भए पनि उनले साहित्य रचना मात्र गरे । जर्मनका लेखक एरिख अर्बाखले यहुदी भएको कारण हिटलरको शासनकालमा टर्कीको विश्वविद्यालयमा निर्वासनमा बस्दा साहित्यिक कृति ‘माइमेसिस’ (१९४६) लेखे, राजनीति लेखेनन् । मैले बीपी र एरिखको त्यो लेखकीय अवस्थाको विषयमाथि एकेडेमीको अंग्रेजी जर्नल ‘नेपलिज् लिटरेचर, आर्ट एन्ड कल्चर’ (२०१५:१) मा लामो लेख लेखिसकेको छु ।
महेन्द्रले पनि बीपीलाई राजनीतिक भाष्यभन्दा साहित्यिक त्यसमा पनि कविताको भाष्यमा सम्बोधन गर्न चाहेका उदाहरणले बीपीको एक साहित्यिक र उज्यालो व्यक्तित्वले महेन्द्रलाई सधैं खिचिबसेको देखिन्छ । त्यो आकर्षणपछि महेन्द्रका मनमा शंका र भयमा परिणत भयो । उनले गरेको ‘कु’ लाई जोडेर हेर्दा त्यसका मनोगत आयामका अनेकौं पक्ष खुल्छन् । बीपीले आफ्ना संस्मरणमा महेन्द्रलाई अनेकौं ढंगले चित्रण गरेका छन् । साहित्यको प्रसंग आउने सन्दर्भमा उनको महेन्द्रसँग न्यानो सम्बन्ध देखिन्छ । ‘आत्मवृत्तान्त’ (२०५५) बाट केही प्रसंग राख्छु । यो संस्मरण बीपीका अन्तिम दिनमा तयार पारिएको हुनाले यसमा बीपीले भनेका कुराको महत्त्व धेरै छ । उनले भनेका छन्, ‘बाहिर देखाउँदा जे गरे पनि राजाले जहिले पनि मलाई बडो सम्मान गर्थे ।’ ‘मेरो एउटा सानो घर बनेको छ, बंगलो छ, फेवातालको किनारमा । त्यहाँ तपाईं जानुपर्‍यो, मसँगै बस्नुपर्छ अलि दिन मेरो पाहुना भएर, भनेर राजाले भने ।’ यही बंगलोमा राजा महेन्द्र र रानी रत्नाका अतिथि भएर ‘६/७ दिन’ बसेका बेला बीपीले महेन्द्रको साहित्यमा रुचि, संगीत साधना आदि विषयमा कुरा उठाइदिए ।
महेन्द्रले सरल किसिमले आफ्ना साहित्य रुचिको विषयमा बीपीसँग कुरा गर्न पाएको देखिन्छ । राजाले बाल्यकालदेखि नै ‘मेरो त बडो एक्लो जीवन थियो’ भनेर बीपीलाई सुनाए । ‘होइन, सरकारको बारेमा सुन्दछु, पढ्नमा खुब अभिरुचि छ,’ बीपीले ‘प्रगति’ का सम्पादक नारायण बाँस्कोटाले राजालाई भनेर कामुहरूका किताब लैजाँदा उनले सोधेका थिए, ‘राजाले यो कामु बुझ्छन् र ?’ अनि बीपीले त्यही कुरा सोध्दा राजा महेन्द्रले भने, ‘अहँ, मैले कामु पढेको छैन । सार्त्र पढेको छैन । र, मैले अलिकति हिन्दीका साधारण किताबहरू हेरेको छु । त्यसो हुनाले, मैले पढ्ने मौका कहाँ पाएँ र ?’
मवीवि शाहका केही गीतका शीर्षकहरूबाट पनि यो बुझ्न सकिन्छ । ती शीर्षकका गीतहरू नेपाली, भारतीय र पाकिस्तानी गायकहरूले पनि गाएका छन् । त्यो बेलाका मार्क्सवादी समालोचकहरू, खासगरी तारानाथ शर्मा र एक जना चीनमा क्षयरोगको औषधि गरेर बसेकी स्नेहलता पन्तले ‘बगैंचा’ पत्रिकामा कडा आलोचना गर्दै महेन्द्रका कवितामा हिन्दी गीतको सोझो प्रभाव छ भनेर लेखेका थिए ।
तर, बीपीले महेन्द्रको कविता लेख्ने र शास्त्रीय गीत सुनाउने चाहनालाई सहानुभूतिपूर्वक लिए, जुन उनका यो भनाइबाट प्रस्ट हुन्छ, ‘यत्रो एउटा सुगमता रहेछ सरकारलाई आत्माभिव्यक्तिको माध्यमबाट । ...सरकारले कविता पनि लेखिबक्सिन्छ । यसलाई पनि सरकारले अघि बढाइबक्सनुपर्‍यो ।’ राजा महेन्द्रको बीपीसँगको कुराकानीमा साहित्य खास गरी कविता आउनु महेन्द्रले त्यो आफ्नो एक्लो जिन्दगीको एउटा अभिव्यक्ति हो भनेर बीपीलाई सुनाउन चाहने उत्कण्ठाको परिणाम थियो । बीपीले राजा महेन्द्रको कवितामा कुनै राजनीतिक उथलपुथल र शक्ति लोलुपता देखेनन् ।
राजा महेन्द्र उनका कवितामा माथि भनेजस्तो उनको एक्लोपन र रिक्ततालाई जीवन र अर्थमा रूपान्तरण गर्न लेख्ने रहेछन् भन्ने कुरा उनको पूरै लगनशीलता, त्यसैबाट कवि कहलाउँने चाहनामा देखियो । बीपीलाई कविताको माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने राजा महेन्द्रको चाहना थियो भन्ने एउटा उदाहरणमा पनि देखिन्छ । प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला भारतको भ्रमणमा जाने एक दिन अघि टुरको सवारी क्याम्पमा महेन्द्रले बोलाए । त्यहाँ राजाले एउटा यस्तो कविता सुनाए–
‘अब तिमी हामीलाई छाडेर जान्छौ
तिमी ठूला–ठूला सहरमा विदेशमा घुम्न जान्छौ
रमाइलो तिमीलाई होला
हामीहरू त यही नदी, कन्दरा र चौतारीमा सुस्ताउँला
र, तिमीलाई सम्झौंला
र हामीहरू त तिमीलाई बिर्सन सक्तैनौं
जब थाकेर चौतारीमा पसिना पुछौंला
त्यसबखतमा म तिमीलाई सम्झौंला ।’
हामीबाट ‘म सम्झौंला’ भनेर उनले लेखेको अर्थपूर्ण छ । यस कवितालाई समालोचकहरूले एउटा बनावटी भावना भने । मैले पनि त्यस्तै लेखें । तर, बीपीले अर्कै भनेका छन्, ‘यस्तो सुन्दर कविता उनले सुनाए, मलाई सम्बोधन गरेर ...त्यो कविता सुन्दर र भावुक थियो ।’
राजा महेन्द्रको भावुकताको अनि उनको मनोगत गम्भीर कमजोरीको चित्रण बीपीले जस्तो अरूले गर्न नसक्नुमा पनि उनको र महेन्द्रको सम्बन्धको यही पक्ष थियो । शक्तिका सपना र कविताको माध्यम एउटा बलियो विषय हो । राजा महेन्द्रको पञ्चायत युटोपिया उनको शक्तिसपना थियो, जसलाई बीपीले ‘अदालतको बयान’ मा जरैदेखि भत्काइदिएका छन् ।
प्रकाशित : पुस १०, २०७८ ०९:२५
पोयट लरिएट जोन बेच्जमिनकी श्रीमती नेपाल भ्रमणमा आएकी थिइन् । घोडाबाट लडेर उनको मृत्यु भयो । नेपालको ब्रिटिस सिमेट्रीमा उनलाई समाधिस्थ गरिएको छ रे  ! के उनको सधाधिबारे तपाईंलाई थाहा छ ?
मंसिर १८, २०७८ अभि सुवेदी
ग्रेटा राणा (सन् १९४३) एक उपन्यासकार अनि कवि हुन् । ती नारीहरूका अन्तर्कथा, तिनका पीडा र शक्ति विषयमा लेख्ने लेखक हुन् । तिनले राणा एसियाली–ब्यारोक भवनभित्र गुमनाम भएका नारीहरूदेखि लिएर साधारण जीवनका पात्रहरूसम्मका चित्रण गरेर उपन्यास लेखेकी छन् । अझ मैले उनलाई एक कविका रूपमा अध्ययन गरेको छु, तिनका कवितासंग्रहको विमोचन र व्याख्या गरेको छु ।
विद्यार्थीहरूलाई उनका लेखनमा शोध गर्न सल्लाह पनि दिँदै आएको छु । त्यसैले म ग्रेटासँग अनेकौं विषयमा छलफल गर्छु । त्यस्तै एउटा विषयले मलाई घचघच्याइरहेकाले मैले ग्रेटालाई सोध्ने विचार गरेको निकै समय भएछ । सधैं बिर्संदो रहेछु । तर, मलाई त्यो प्रश्न सोध्ने र ग्रेटाको विचार र सहयोग माग्ने चाहना झन् बढेकाले केही वर्षपहिले मैले उनलाई त्यो कुरा सुनाएँ । ब्रिटेनमा निकै वर्षअघि मलाई एक जना महिला कविले साहित्यिक जमघटमा एउटा कुरा सोधिन् । तिनले अकस्मात भनिन्— मैले सुनेको ब्रिटेनका ‘पोयट लरिएट’ (कवि शिरोमणि) जोन बेच्जमिन (सन् १९०६–८४) की श्रीमतीको नेपालमा पर्वत भ्रमणमा जाँदा घोडाबाट लडेर मृत्यु भयो अनि तिनलाई नेपालको ब्रिटिस सिमेट्रीमा समाधिस्थ गरिएको छ रे ।
ती अत्यन्त स्वाभिमानी र संघर्षशील नारी थिइन् रे । के तिनको सधाधिबारे तपाईंलाई थाहा छ ?’ मेरो निम्ति त्यो विषय एकदमै नौलो थियो । मैले त्यो कुरा ग्रेटालाई सुनाएँ अनि तिनको समाधि खोज्न ग्रेटाको सहयोग मागेँ । आफूले अध्ययन गरेका र गराएका अंग्रेजी कविकी श्रीमतीको प्रसंग थियो त्यो । ग्रेटालाई त्यो कुरामा चाख लाग्यो । अनि उनले ब्रिटिस राजदूतावासबाट नक्सा र स्वीकृति लिइन् । अनि हामी शिव रिजाल र म ग्रेटासँग त्यो अनौठो खोजका निम्ति ब्रिटिस सिमेट्री गयौं । त्यो भ्रमण विषयमा लेख्नुपहिले ग्रेटा राणाको लेखन र उनको इतिहाससँगको आफ्नै किसिमको लेखकीय संघर्षको विषयमा केही लेख्छौं ।
ग्रेटा राणा नेपालमा एक प्रख्यात महिला लेखकको नाम हो । ती एक कुशल रंगकर्मी पनि हुन् भन्ने हामी रङ्गमञ्च समाजका कतिपय मानिसलाई समेत थाहा छैन । तर, तिनको आधी शताब्दीको नेपाली जीवनका अनेकौं आयाम हेर्दा र पढ्दा मलाई एउटा कुराले सधैं समातिरहन्छ । ग्रेटा राणालाई मैले धेरै वर्षअघि भेट्दा एकाध कुराले चकित परेको थिएँ । ती साधारण रूपले एक जना नेपालीसँग प्रेमविवाह गरी नेपाल आएकी महिला हुन् । तर, पहिलो भेटमै मलाई लाग्यो, ती एक जना सीमातीत भूमिमा बस्ने पात्र थिइन् ।
बेलायतको पहिलेको कोइलाखानी भएको योर्कसरको एउटा सहरमा जन्मेर हुर्केकी केटीको मधुकरशमशेर भन्ने एक नेपाली विद्यार्थीसँग भेट भयो । अनि तिनैसँग बिहे गरेर सन् १९७१ देखि नेपालमा बसोबास भएको ग्रेटाको कथामा खासै केही जटिलता छैन । सोझो कथा हो । तर, ग्रेटाका निम्ति त्यो सोझो कथा थिएन । त्यो एउटा खोजीको यात्रा र एउटा जीवनशैलीको कथा थियो । एउटा राणा परिवारमा बिहे गरेर आएपछि थाहै नपाई ती एक पात्र भइन् । सुरुका दिनहरूमा ग्रेटाले राणा दरबार परिसरमा उनले कल्पना गरेका वा देखेका छायाहरूका एकाध कथा पनि मलाई भनेको सम्झना छ । मलाई त्यहीबेला लागेको थियो, यी एउटी लेखक हुन्, जो एउटा अभिजात राणा घरको वास्तु रचनाभित्र पसेर त्यसको काल्पनिकीमाथि विचार गरिरहेकी थिइन् । ग्रेटा पश्चिमी शैलीका नवव्यारोक राणाका घरमा बिहे गरेर भित्रिएकी एउटी ब्रिटिस महिला थिइन् । ती लेखक भएकी हुनाले उनले ती भवनको अन्तर्य हेरिन् अनि तिनका भित्री संरचना बुझ्ने कर्ममा लागिन् ।
वास्तुकला र त्यसमा बस्ने मानिसको अनौठो सम्वन्ध हुन्छ भन्ने मानिएको छ । पश्चिमी शैलीका घर बनाएर बस्ने भारतीय उपमहाद्वीपका महाराजा र रजौटाहरूले सोझो पश्चिमी शैलीका महलमा आफैंलाई पहिचान गर्न नसकेपछि ती शैलीलाई परिवर्तित गरे । त्यसलाई हामी एसियाली ब्यारोक भन्छौं । यस्ता एसियाली ब्यारोक शैलीका महल बनाएर बस्ने राणा परिवार र घरानाहरूले ती महलसँग कस्तो सम्बन्ध गरे ? त्यो एउटा अध्ययनको विषय हो ।
मैले यसमा केही लेखेको छु, विस्तृत होइन । मेरो नाटक ‘सान्दाजुको महाभारत’ (२०७२) मा बीपी कोइरालाले अदालतमा बयान दिँदा माथि महलको बुर्जामा बसेर न्याय दिने बहाना गर्नेहरूलाई र तिनको एसियाली ब्यारोक भवनलाई चुनौती दिएको कुरा लेखेको छु । हो त्यस्तै घरभित्र आएकी यी प्रतिभाशाली सरल युवतीले पनि चुनौती दिनुपर्ने आवश्यकता भयो । अनि ग्रेटा यस्तो चुनौती दिन एसियाली ब्यारोकभित्रका विगतका नारी पात्रको खोजीमा लागिन् । ग्रेटाले पहिले आफैंलाई पात्र बनाइन् अनि ती महलभित्रका विगतका नारीका कथा भेटिन् ।
यो लेखको विषय त्यो नभएकाले उनको एउटा महत्त्वपूर्ण उपन्यासको मात्र यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु । त्यो अर्द्धऔपन्यासिकजस्तो लाग्ने ऐतिहासिक खोज र वर्णन हो । त्यसको नाम ‘राणा वंशका लुप्त शासकीय महिलाहरू’ अथवा ‘हिडेन विमिन : द रुलिनङ विमिन अफ् द राणा डाइनास्टी’ (२०१२) मा ग्रेटाले अनुसन्धान र काल्पनिकी प्रयोग गरेर तिनको विषयमा लेखिन् । नेपालमा सन् १८४६ देखि १९५० सम्मको एक सय चार वर्षको राणा शासनको जग बसाल्ने पहिला राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणासँग जोडिएका नारीहरू उनका पात्र बने । ग्रेटाको लेखन विषयमा यहाँ यत्ति नै ।
हामी ब्रिटिस दूतावासको पश्चिमपट्टिको सिमेट्रीमा गयौं । त्यसमा अनेकौं चिहान वा समाधिहरू हेर्‍यौं । ग्रेटाले कवि बेच्जमिनकी श्रीमतीको समाधि खोज्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएकी थिइन् । त्यस क्रममा हामीले निकै जनाका समाधि वा चिहान भेट्यौं । मैले चिनेकी बोरिसकी श्रीमतीको चिहान उनकै पतिको छेउमा रहेछ । उनको मृत्यु भएको पनि मलाई थाहा थिएन । उनी वृद्ध महिला थिइन् मैले चिन्दा । त्यहाँ एउटा निकै फराकिलो चिहान रहेछ । त्यो हेक्टर ओलफिल्ड र उनका नाबालक छोराहरूको हो । जंगबहादुरको आदेशमा त्यो विशेष समाधिस्थल बनाइएको रहेछ । ओलफिल्ड सन् १८५० देखि १८७३ सम्म ब्रिटिस रेजिडेन्सीमा सर्जनको रूपमा कार्यरत थिए ।
उनी चित्रकार पनि थिए । उनको ‘स्केचेज फ्रम नेपाल’ (१८८०) किताब केही वर्षपहिले नेपालमा पुनर्प्रकाशित भएको छ । उनका रंगीन चित्र छन् यसमा । तिब्बत हमला गर्न जाँदा ओलफिल्ड धीरशमशेरसँग गएकाले तिनले तिब्बती परिवेशका चित्र र काठमाडौंको त्यो बेलाको भूचित्रलाई उनका चित्रमा उतारेका छन् । तिनको स्मृतिमा उनको परिवारकै समाधि राम्ररी बनाइएको रहेछ । ओलफिल्डको पारिवारिक जीवन दुःखी रहेछ ।
मैले यो उत्सुकतालाई जारी राखें । अनलाइन खोजी गर्दा कविपत्नीबारे अनेकौं कुरा थाहा पाइने रहेछ । जोन बेच्जामिनकी यी हामीले खोजेकी श्रीमती ग्रेटाको भाषामा उनकी ‘कान्छी स्वास्नी’ थिइन्, जसलाई कविले भारतमा बिहे गरेका थिए । तिनको नाम पेन्लोपी चेटओड थियो । ती ब्रिटिस भारतका उच्च सैनिककी छोरी रहिछन्, जसलाई कविले भेटेर मन पराएर बिहे गरेका थिए । त्यो विवाह खासै लामो टिकेको थिएन । मैले पढेअनुसार, पेन्लोपी कुलु पहाडलाई अत्यन्त प्रेम गर्थिन् । त्यही क्रममा उचाइमा यात्रा गरेका बेला तिनको बाटोमा कुनै दुर्घटना नभई मृत्यु भएको पढें ।
कवि शिरोमणि बेच्जामिनकी यी श्रीमतीको काठमाडौंको सिमेट्रीमा समाधि छ भन्ने कुरामा अहिले मलाई खासै विश्वास लाग्न छोडेको छ । तिनको कुलुको समाधि भएको ठाउँमा लेखिएको एउटा बयान पनि पढें । यो खोजी एक ब्रिटिस कविले भनेको आधारमा गर्न खोजिएका एउटा संयोग हो । यसको अरू ऐतिहासिक महत्त्वभन्दा पनि एउटा अंग्रेजी साहित्यिक प्रसंगबाट आएको हो । ग्रेटालाई भेटेपछि यो कुरा फेरि गर्नेछौं ।
प्रकाशित : मंसिर १८, २०७८ १०:४५